Date: 19 janvier 2018 - 08:40
Date: 21 janvier 2018 - 11:22
Resaka pneus occaz koa. Rehefa vita na hiditra ny hiver dia misolo pneus daholo ny olona. Tsy vidina akory ireo pneus ireo fa angatahina fotsiny @ garage ireo. Vetivety dia feno ny container.
Betsaka anie ny zavatra mety atao fa la douane tena mandreraka.
Date: 25 janvier 2018 - 14:25
Misy ilay EUROMADA AUTOMOBILE oe ampahibe, manao pub be mihitsy oe 2 000 000 ar n voiture légère d ef mahazo, 10 000 000 ar sprinter, misy site sy fb iz io , f ts misy sary lotr aaseon f oe makany , f e fmb nisy ve tato nahit ny tan d tsara ve sa manao ahoan e !